Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hogaamiyeyaasha Dunida Ee Maanta. By: Liibaan Miyir
Maqaal: Hogaamiyeyaasha Dunida Ee Maanta. By: Liibaan Miyir
Saaxiibayaal daraasadan waxaynu ku eegaynaa dhaqamada hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee caalamka kajira. Waana macluumaad xambaarsan aragti qodo dheer iyo fikiro kala duwan leh, Qarnigan 21aad hogamiyayaasha dunidu waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood oo ah himiladooda hogaamineed.
Aan ku horaynee qaarada (Mugdiga iyo maan la’aanta) ee Africa ooy hadhaysay dib udhaca ugu liita ee nololeed taasoo ay ugu wayntahay Qabyaalad, Musuq iyo Kooxaysiga ku salaysan soo jireenimo aad u qododheer. Hogaamiyeyaasha Qaarada Africa 31% waxaa saldhig u ah ama hamigoodu uu yahay inay shuruudahan leeyihiin (Habaarane + Hawo beenaale + Hunguridoon) = (Xukun jacayl iyo kaligiitalisnimo).
Dhinaca kale hoogaamiyeyaasha Reer Galbeedku Hamigoodu 29% waa kuwo ku sifoobay (Kuligood xukun + Kaligaana noolow + Kurbada iyo dhibkana badi) = (Muslimkana la dagaal oo erayga argagaxiso u adeegso).
Qaarada Aasiya Hogaamiyeyaashoodu waxay ku hamiyaan 32% (Ma naxaan ahow + Madaxnimana hano + Mabda’aagana Adkee) = ( Macnahoodu waxaa weeye waxa ka dhacaya caalamka fikir wayna kuma laha calaf iyo cod midna kuma kordhiyaan, indhaha uun ka dhawro) Siyaasada caalamka waxaan tooda ka ahayn Raad kuma laha Taas ayaa sabab u ah inay ku sifoobaan 3dexdaa calaamadood.
Hagaag hadaba waa kuwee hogaamiyayaasha uu maanta u baahan yahay caalamku Aragti ahaanse maxay xambaarsan yihiin? Waxaan ku micneeyay Inay iyaguna leeyihiin shuruudahaan 8% waana sidatan (Hogaamiye Daacad ah + Hindise fiican + Hagarlaawe dhab ah) = ( oo u jeedadoodu tahay Duni nabad ah ooy kajirto Nolol iyo Cadaalad).